UNeruda akazange abulawe ngumdlavuza | Izincwadi Zamanje
UNeruda, Imbongi yaseChile futhi Umklomelo kaNobel Ezincwadini, akazange abulawe ngumdlavuza njengoba kukhombisa isitifiketi sakhe sokushona. Ochwepheshe be-forensic abebephenya leli cala eliyimpikiswano, banqume kuleli sonto eledlule eSantiago de Chile ukuthi izimbangela zokufa kwembongi kungenzeka ukuthi bezingenye njengoba bekhombisile embhalweni owethulwe ukwahlulela uMario Carroza, lapho beveza khona zonke iziphetho zabo. Lokhu nguyena namuhla ohamba phambili ekuphenyweni ngokushona kwembongi, eyashona ngesikhathi sobushiqela sika-Augusto Pinochet.
Njengoba kukhonjisiwe ngusolwazi waseSpain u-Aurelio Luna, oyingxenye yalolu cwaningo: «Izifundo ezihlobene nenkomba yesisindo somzimba ngokusebenzisa ububanzi bebhande lakho zisivumela ukuthi singafaki ubukhona be-100% i-cachexia«. ULuna uchaze ukuthi imbangela yokufa kombhali bekungeyonai-cachexia«, (Ukuguqulwa okujulile komzimba okubonakaliswa ukungondleki, ukuwohloka kwezinto eziphilayo kanye nobuthakathaka obukhulu bomzimba), njengoba kukhonjisiwe embikweni.
Kepha lokhu akukhona nje kuphela okutholakele ocwaningweni olunjalo kepha kutholakele ne-elementi engaba yi- amabhaktheriya akhule elebhu. Lokhu okutholakele kwakamuva kuyaphenywa futhi kuyafundwa kanti imiphumela izokwaziwa zingakapheli izinyanga eziyisithupha kuya onyakeni owodwa. "Ngemiphumela esinayo manje, asikwazi ukukhipha noma ukugcizelela isimo, semvelo noma esinodlame, sokufa kukaPablo Neruda", ungeze uSolwazi Aurelio Luna.
Njengoba usuvele uyazi ukuthi ngubani olandele impilo nomsebenzi wombhali waseChile, uPablo Neruda ngaleso sikhathi, wayeyingxenye ye IKomidi Elimaphakathi Leqembu LamaKhomanisi futhi ushone emasontweni amabili kuphela ngemuva kombhikisho onqobe umongameli wobusoshiyali uSalvador Allende. Ngakolunye uhlangothi, kukhona uhlobo olunikezwe ngumshayeli wezimbongi, uManuel Araya, obehlale ekuqinisekisa ukuthi uNeruda wabulawa ngomjovo obulalayo owayalelwa ngamanxusa ombuso.
Njengoba kuvame ukushiwo kulawa macala, iqiniso licishe livele njalo, ... Siyethemba ukuthi lo okulesi simo uzobona ukukhanya ngokushesha futhi ekugcineni ubulungiswa bungafezwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » UNeruda akazange abulawe ngumdlavuza
UJose Stenio Ferreira Luz kusho
Ngiye ngabulawa kakhulu ekuqothweni kwegazi okuleminyaka efanayo.
Phendula uJosé Stenio Ferreira Luz